पुरुषले गाएको तीज गीत कस्तो लाग्छ ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः श्रावण २०, २०७६ - साप्ताहिक
पुरुषले गाएको तीज गीत कस्तो लाग्छ ?
दिदीबहिनी मात्र नाच्छन् जहिले पनि तीजमा, हामी पनि नाच्नुपर्छ बीचबीचमा भनेर गुनासो गरिसकेपछि त पुरुषहरूले पनि यो अधिकार पाउनुपर्छ जस्तो लागेको छ ।
हिजोआज महिलाहरू त जनै लाएर हिँड्न थालेका छन् भने पुरुषले तीज गीत गाउनु कुन अचम्मको कुरा हो र ? लय, शब्द र संगीत राम्रो छ भने पुरुषले पनि मज्जाले तीज गीत गाउँदा हुन्छ ।
महिलाले मात्र चाडपर्व मान्दा विभेद हुन्छ, त्यसैले दसैं, तिहार, छठ आदि जस्तै तीजमा पनि सबै मिलेर रमाउनुपर्छ । सिर्जनामा विभेद गर्नु पनि हुँदैन । तीजमा महिलाले नै पोइल जान पाम भनेर गाउने अनि पुरुषलाई चाहिँ गीत नै गाउन नदिएपछि कोसँग पोइला जाने त ?
जसले गाए पनि गीत त गीत जस्तै लाग्छ, तर पुरुषले गाएको तीजको गीत खासै गतिलोचाहिँ हुँदैन । पुरुषले गाएको तीज गीत मलाई त्यति मन पर्दैन ।
यो कुरा गीतको भावमा भर पर्छ । गीत गाउनै हुँदैन भन्ने त होइन, तर तीज गीत पनि रत्यौली पाराले गाएको देख्दा–सुन्दा भने अचम्म लाग्छ । अहिले तीज गीतलाई पुरुषहरूले ठाडै विवाहको प्रस्ताव गर्ने रूपमा प्रस्तुत गरेको देख्दा दुःख लाग्छ । यस्ता गीतलाई किन सामाजिक बहिस्कार गर्न नसकेको ?
तीजमा गीत गाउँदै नाच्ने केटालाई सारी–चोली दिन मन लाग्छ ।
केटाले लगाउने पाइन्ट केटीले लगाउँदा जस्तो लाग्छ, त्यस्तै लाग्छ ।
मलाई त असारे झरीमा सडक कालोपत्रे गरेजस्तो लाग्छ— सार्‍है रमाइलो ।
पुरुषले तीज गीत गाएको पनि राम्रै हुन्छ, तर दुर्गेश थापाले जस्तो गाउनुपर्छ ।
पुरुषहरूले पनि तीज गीतबाट राम्रै कमाइ गरिरा’ छन् । यो राम्रो कुरा पनि हो, तर महिला र पुरुष दुवैले गाएको गीत अनि भिडियोचाहिँ अलि छाडा हुन्छन् । तीज के हो, यसको अर्थ एवं मौलिकता नै बिर्सिएजस्तो लाग्छ ।
खासमा त तीज महिलाहरूको पर्व हो, तर सबैको आ–आफ्नै इच्छा–चाहना हुन्छ । मेरो विचारमा तीज विशेष गरेर महिलाको पर्व भएकाले यसलाई महिलामै सीमित रहन दिनुपर्छ ।
आफ्नै दिदीबहिनीसँग नाचेर–गाएर रमाइलो गर्दा कुनै आपत्ति हुँदैन । आपत्ति त तब हुन्छ जब तीजको नाममा अनेकन् विकृति देखा पर्न थाल्छन् । तीजको नाममा हुने र भएका विकृति हटाउनुपर्छ । समावेशिताको खोजी भैरहेका बेला पुरुषले पनि तीज गीत गाउनु कुनै नौलो कुरा भने होइन ।
नारी–पुरुष बराबर भनिरहेको अवस्थामा गीत गाउँदा केही हुँदैन । अन्य चाडपर्वजस्तै तीज गीतमा पनि पुरुष स्वर ठीकै लाग्छ ।
पुरुषले गीत गाए पनि मौलिकताका साथसाथै धर्म–संस्कृतिको संरक्षण गर्ने खालको गाए त केही फरक पर्दैन ।
जसले गाए पनि तीजका गीतहरूमा अहिले दर, माइती, सासूबुहारी, घरझगडा, दाजुबहिनीबीचको प्रेम, मिलनबिछोड आदि जस्ता शब्द कहाँ हुन्छन् र ? हिजोआज झ्याउरे र रत्यौलीलाई तीज गीत भन्न थालिएको छ । पुरुष हुन् वा महिला, जसले गाए पनि एकाधबाहेक यी सबै गीत तीज गीत होइनन् ।
जसले गाए पनि आजकालका तीज गीत कलाकारहरूको सेरोफेरोमै रमेजस्तो लाग्छ । दूरदराजका गाउँघरमा पाका दिदीबहिनीहरू जम्मा भएर वर्षभरिको दुःखसुखलाई गीतका माध्यमबाट आफ्ना भावना व्यक्त गरेका कुरा आउन छाडेका छन् । सहरिया कलाकारहरूले कमाउनकै लागि मात्र तीज गीत बजारमा ल्याउने चलन बढेको छ । बजारमा आउने ककटेल गीतहरूका कारण नेपालबाट तीज संस्कृति नै हराउने त होइन भन्ने लाग्न थालेको छ ।
नाचौं–नाचौं लाग्छ मलाई त । आजकाल केटीले मात्र गाएको तीज गीत नै आउँदैन । मलाई केटाहरूले तीजमा गीत गाएको राम्रो लाग्छ ।
एकदमै राम्रो लाग्छ । महिलाले मात्र तीजका गीत गाउनुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ र ? त्यसै पनि महिला र पुरुष एक–अर्का बिना अपुरो नै रहन्छन् । त्यसैले जुनसुकै काम पनि दुवै जना मिलेर गरेको राम्रो ।
प्रकाशित :श्रावण २०, २०७६